Suuqgeynta Moobilada: Shabakadaha, Barnaamijyada, SMS & QR Codes - Raaxo ama Loo Baahan Yahay?
By 2015, Internet-ka mobilada ayaa dhaafi doona isticmaalka desktop-ka sanadkii la soo dhaafayna isticmaalkiisu wuu laba jibaarmay. Dad badan oo go'aan gaara ayaa adeegsanaya shabakadda moobiilka si ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u kala doortaan xulashooyinka. Ilaa 50% fursadaha khadka tooska ah ayaa lagu waayi karaa iyada oo aan la helin lana geyn istiraatiijiyad moobiil shirkad ama shirkad. Sanadaha soo socda boqolleydani way sii socon doontaa. Su'aashu waxay tahay - Websaydhkaagu ma ku habboon yahay shabakadda moobiilka oo suuqgeyntaada gudaha ah ayaa ka faa'iideysaneysa moobiilka?
Oktoobar 27th, John McTigue (EVP) iyo Chad Pollitt (Dir. Ee Warbaahinta Bulshada & Suuqgeynta Raadinta) ee Kuno Hal-abuurka oo la soo bandhigay "Suuqgeynta Suuqgeynta Moobilka Soo bandhigiddu waxay iftiimisay afar meelood oo muhiim u ah suuqgeynta moobiilka iyo tixgelinta:
1. Shabakadaha Moobaylka
Naqshadeynta websaydhka mobilada hababka ugu fiican
Caqabadaha shabakadaha mobilka
Naqshadeynta websaydhka casriga ah
Meel gooni ah oo moobiil ah oo ka soo horjeedda naqshadeynta websaydhka
Waxyaabaha ugufiican bogagga internetka
2. Araajida Codsiyada
Faa'iidooyinka & khasaaraha ee barnaamijyada
Meelaha moobiilka iyo barnaamijyada
3. SMS / Text Fariin
Tirakoobka & tirakoobka dadka
Tusaalooyinka ololaha SMS
Olole SMS-socod ah
4. Xeerarka QR
Tusaalooyinka ololaha ee QR code
Ololaha QR code socod-dhex
Intaa waxaa sii dheer, soo bandhigiddu waxay sahmisay tikniyoolajiyadda iyo aaladaha u oggolaanaya in si xoog leh loo geeyo ololeyaasha suuqgeynta moobiilka iyadoo laga wada hadlayo siyaabaha si aan kala go 'lahayn loogu dhexgalin karo moobiilka ololayaasha tooska ah iyo kuwa hadda socda. Qaar ka mid ah qalabka laga hadlay waxaa ka mid ah Qabsashada 44Doors, MoFuse iyo HubSpot.
Suuqgeynta moobiilka soo galaya maahan wax raaxo u ah suuqleyda inay tixgeliyaan. Iyada oo ku saleysan tirakoobka, adeegsiga iyo isbeddellada waa shuruud looga baahan yahay shirkadaha iyo noocyada doonaya inay gaaraan oo ay la xiriiraan dadka ay bartilmaameedsanayaan. Kuwa doorta inaysan diidin waxay naftooda uga tagayaan kuwa u nugul tartamayaasha kuwaas oo doorta inay ka faa'iidaystaan ​​awoodda suuq geynta moobiilka. Wixii macluumaad dheeraad ah, si xor ah u arag video-ga oo dhameystiran soo bandhigida suuq geynta moobiilka.
Tags: Suuqgeynta Mobilada iyo MashiinkaNaqshadeynta Websaydhka MoobilkaXeerarka QRSMS